Samsung Pay 3.8.72 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.8.72 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား လူေနမႈပံုစံ Samsung Pay
Samsung Pay ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
•က Samsung Pay ကိုအတူ, သင့်ထုတ်ကုန်အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ ငွေထုတ်,, ဆုကြေးဇူးကိုနှင့်အဖွဲ့ဝင်ကတ်များ ထည့်ပါ။ *
•က Samsung Pay ကိုထိပ်တန်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘဏ်များနှင့် တွဲဖက်. အမေရိကန်Express®, Discover®, MasterCard®နှင့်Visa®ငွေပေးချေမှုကဒ်ကွန်ရက်များနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့သည်။
•သင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်တူညီဝယ်ယူမှုများအတွက် အပိုဆုလာဘ် ကိုရယူပါ။ Samsung ကဆုလာဘ်ကိုသင် နေ့စဉ်ဝယ်ယူဘို့အချက်များကိုဝင်ငွေပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဝယ်ယူမှုအနေဖြင့်နှင့် Samsung app များကို အသုံးပြု. အချက်များရယူနိုင်သော, ပြီးတော့ Samsung ကထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုပြီးဆီသို့သူတို့ကိုရွေးနှုတ်တော်မူ။
•လုံခြုံရေးအနေနဲ့ အပိုအလွှာနှင့်အတူ, Samsung က Pay ကိုအတူတစ်ဦးချင်းစီငွေပေးငွေယူ pin ကိုနံပါတ်သို့မဟုတ်မျက်ဝန်း scan, လက်ဗွေရာကနေတဆင့်သင့်ရဲ့ဘဏ်ရဲ့လိမ်လည်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနေသည်။ သင်၏ကဒ်သတင်းအချက်အလက်သီးခြားနှင့်လုံခြုံဒေတာ Vault အတွက် encrypt လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
•က Samsung Pay ကိုနေရာများကို သန်းပေါင်းများစွာမှာလက်ခံသည်။ web ပေါ်မှာနှင့်ပါဝင်ကုန်သည် apps များအတွက်, စတိုးဆိုင်များတွင်အမှုအရာကိုဝယ်ခြင်းငှါအသုံးပြုပါ။
• Discover အပေးအယူ, လက်ဆောင်ကတ်များ, ပရိုမိုးရှင်းနဲ့ ပြည်တွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစတိုးဆိုင်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှ ပေးထားပါတယ်။
* ကိုရွေးပါကတ်များနှင့်ပါဝင်ဘဏ်များနှင့်ခြေစစ်ပွဲကို Samsung Device များနှင့်အတူသာလျှင်သဟဇာတ။ အချို့အင်္ဂါရပ်အချို့နိုင်ငံများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်များပေါ်မှာရရှိနိုင်သော: က Galaxy S9 နဲ့ Galaxy S9 + က Galaxy Note8, က Galaxy Note9, က Galaxy S8 မှာနဲ့ Galaxy S8 မှာ + က Galaxy S7 အစွန်း, က Galaxy S7, Galaxy S6 အစွန်း + က Galaxy Note5, Galaxy S6 အစွန်း, Galaxy S6 တက်ကြွ, Galaxy S6, ဂီယာ နဲ့ Gear S3 ကို (သာ NFC ကိုနှင့်အတူ) S2
သို့တိုင်မေးခွန်းများ? http://samsungpay.com: ပိုပြီးလေ့လာပါ
** မှတ်ပုံတင်ခြင်းလိုအပ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ & အခြေအနေများသက်ဆိုင်ပါသည်။
Samsung Pay အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Samsung Pay အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Samsung Pay အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
premiumapp စတိုး 1.79k 2.07M
Samsung Pay ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Samsung Pay အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.8.72
Release date: 2019-07-19 16:20:49
Samsung Pay APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ